Ururka al-shabaab oo lagala wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Baay – STAR FM SOMALIA
Ururka al-shabaab oo lagala wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Baay
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda Somaliya ay kula wareegeen shalay galab tuulooyin ku yaallo Gobolka Baay ee Koonfurta Somaliya.
Ciidamada, ayaa la wareegay saddex tuulo oo hoostagga Magaalada Diinsoor ee Gobolkaasi, iyadoo labo ka mid ah tuulooyinkaasi la sheegay inay isaga baxeen ciidamada Shabaab, halka ciidanka Huwantana ay si nabadgelyo ah kula wareegeen.
Tuulooyinka ay ciidamada la wareegeen ayaa lagu magacaabaa Mitir, Gurbaan iyo Kanaana, waxaana halkaasi isaga baxay ciidankii Al-shabaab, ka hor inta halkaasi aysan tagin ciidamada dowladda Soomaaliya.
Saraakiisha ciidamada Dowladda ee Gobolka Baay, ayaa sheegaya ciidamada inay ku sugan yihiin deeganada ay la wareegeen, howlgalkana uu yahay mid sii socon doona.
Xasan Aadan Yabaroow oo ka mid ah Saraakiisha ciidamada Dowladda ee howlgalkaasi hogaaminaayay, ayaa sheegay ciidamada tuulada Mitir inay ku qabteen Sarkaal ka tirsan Al Shabaab oo lagu magacaabo C/laahi Maxamed Axmed oo Shabaabka u qaabilsanaa qaadista canshuuraha gaadiidka.
“Ciidamada Deegaanadaasi Laba ka mid ah si Nabad galyo ah ayeey ula wareegeen, hase ahaatee Mitir ayaan kula kulannay Al-shabaab iyaga oo sii baxaya, waxaan ka qabannay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Axmed oo Al-shabaab u qaabilsanaa lacag ka qaadista gaadiidka shacabka, dagaal sidaa u badanna halkaasi kama aanu dhicin.” Ayuu yiri Taliyaha.
Gobolada Baay iyo Bakool, waxaa ka socda howlgal ka dhan ah Ururka Al Shabaab, inkastoo howlgaladaasi hada ay saameyn ku yeelanayana roobabka ka da’aya deegaano ka tirsan Goboladaasi.
Hooyooyin Somaliyeed oo walaac ka muujiyay wiilashooda oo uxiran boliska mareekanka
Kal fadhiga 7 aad ee baarlamaanka oo lagu wado in uu furmo maanta
Wararka6 mins ago
Wararka17 mins ago